Warbixin Maamuka Hargaysa iyo Maamulka Garoowe oo Heshiis wada gaaray |
Warbixin Maamuka Hargaysa iyo Maamulka Garoowe oo Heshiis wada gaaray
Waxaa weli magaalada Nairobi ee xarunta Kenya ka socda Kulan Gaar ah oo toddobadkanba socday kaasoo u dhexeeya masuliyiin ka socday maamulada la magac baxay Puntland iyo Somaliland,waxayna ku hishiyeen inay iska kaashadaan arrimaha la Dagalanka Argagixisada iyo Burcadbadedda.
Shirkan ayaa waxaa Dhanka maamulka la magac baxay Somaliland uga qaybgalay Wasiirada Arrimaha Dibadda, Wasiirka Arrimaha Amniga iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Halka dhanka maamulka la magac baxay Puntland ay Kulanka uga qaybgaleen Wasiirka Amniga, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Madax ka socotay Hay’adda Sirdoonka maamul goboleedka Puntland ee PIA.
labada dhinac ayaa sidoo kele kulan la wada qateen Madax ka kala socotay Sweden, British iyo Maraykanka oo Maamulada kula Taliyay inay Iska Kaashadan la Dagaalanka Argagixisada Gudaha Dalka Somaliya.
Arrimaha ay ku heshiyeen ilaa hadda labadaani maamul goboleed ayaa waxaa kamid ahaa in labada dhinac ay Is dhafsadaan Xogaha ku Saabsan Arrimaha Argagixisada iyo Warbixinada dhinac walbo uu helo oo Dhinaca kale uu Baahi u qabi Karo.
Puntland ayaa mar kale ku celisay in Somaliland feejignaan muujiso ayna eegto shaqsiyaadka looga shakisanyahay Al-shabaab ee ka imanaya Konfurta Soomaaliya una Gudbaya Buuraha Silsaladda Golis iyagoo xitaa Xilliyada qaar ka soo wareegaya dhanka deegaanada Somaliland.
Heshisika Labadan dhinac ay Gareen ayaa Isbedel ku samayn kara La dagalanka Argagixisada Gudaha Dalka oo horaan Mid walba uu dhinicisa ula dagalami Jiray isagoo aan ka warqabin Dhanka kale iyo xogaha uu arrimahaas ka Hayn karo.
Hishiiskan ayaa noqonaya midkii ugu horeyey ee labadan dhinac dhex mara waxaana hadduu dhaqan galo laga yaabaa in uu ka sacido lagagaalanka aragagixsada iyo sugida amaanka Somaaliya iyo gobolkaba,